Qalbii Archives - Page 3 of 3 - Ibsaa Jireenyaa
March 11, 2017 Sammubani 2 comments
Niyyaa jechuun maal jechuudha?
Bakki Niyyaa eessa?
Niyyaa malee hojiin fudhatama ni argataa? Read more
August 27, 2016 Sammubani 5 comments
Ilmi nama jireenya isaa keessatti badii fi dogongoratti osoo hin kufin hin hafu. Badii fi dogongora kanniin keessaa bahuun jireenya ofii akka foyyefatu balballi tawbaa isaaf baname jira. Carraa kanatti fayyadame yeroon yoo tawbate fi jireenya ofii foyyeesse dhugumatti namni suni qaroodha. Gara biraatin immoo carraa kanatti osoo hin fayyadamin namni hafe, mataa ofii malee eenyullee hin ajiifatu (hin waqqasu). Fakkeenyaf mootummaan gamoo (kondominiyeemi) ijaare, ergasii namoonni akka fudhataniif carraa bana. Carraan kuni yeroo hundaa kan turu osoo hin ta’in yeroo dhumaa (deadline) qaba. Namni ulaagaale sirrii guute yoo carraa kanatti fayyadame Insha Allah mana san ni argata yoo mootummaan haqaan kan hojjatu yoo ta’e. Namni carraa kanatti osoo hin fayyadamin “boru biiroo nan deema, boru biiroo nan deema“osoo jedhu yeroon jala darbee mataa ofii malee eenyuun ajiifata ree? Read more
Ilmi nama jireenya isaa keessatti hojii baay’ee hojjata, gaariis ta’uu badaa. Ilmi nama hanga addunyaa tana keessa lubbuun jiraatu osoo hin dogongorin hin hafu. Dogongorri fi cubbuun hanqinnaa fi dadhabinna ilma namaa mul’isu. Osoo gara tawbaatti hin seenin duratti mee miidhaa cubbuun ilma namaa irraan ga’u gabaabinnaan haa ilaallu. Read more
November 29, 2015 Sammubani One comment
“Ofitti amanamummaan guutumaan guututti Rabbitti hirkachuu fi Isatti amanuu irraa kan burquudha. Tarkaanfi hundaa kee keessatti Rabbiin akka si gargaaru beekudha. Yeroo hundaa dadhabaa fi homaa hojjachuu kan hin dandeenye fi hanqinna xixxiqaa irratti of ajiifachuun(blame) yoo duubatti of harkiste,kufaatif saaxilamta. Yaada Rabbiin haqa malee akka si kunuunse yookin wanta nafseen tee hin dandeenye sirra akka godhe jedhu gonkumaa of amansiisu hin qabdu. Rabbiin wanta nafseen baadhachuu hin dandeenye gonkumaa irra hin kaa’u.” – Khurram Murad Read more